နွေလည်အတွေး နှစ်စ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » နွေလည်အတွေး နှစ်စ
Posted by Mr. MarGa on May 17, 2014 in Creative Writing, My Dear Diary | 31 comments
ခုတလော ဦးမာဃ အကျင့်ဖြစ်နေတာလေး တချို့ကို ပြန်တွေးမိ သတိထားမိနေသဗျာ။
ပထမဆုံး သတိထားမိတာကတော့ ထုံးစံအတိုင်း စီးတော်ယာဉ် မော်တော်ဆိုင်ကယ်အကြောင်းပေါ့
ဦးမာဃ ဆိုင်ကယ်စီးရင် ပုံမှန်မရှိဘူးရယ် တစ်ခါတစ်ခါကျ အေးအေးဆေးဆေးလေး၊ တစ်ခါတစ်ခါကျ စိတ်ပါလက်ပါ လီဗာကုန်ဆွဲရင်ဆွဲ တစ်ခါတစ်ခါကျပြန်တော့ စိတ်ပါတာ မဟုတ်ပါဘဲနဲ့ နောက်ကျနေလို့ တက်သုတ်ရိုက် နှင်လိုနှင် ပေါ့။
တစ်လ ကိုးသီတင်း အလုပ်သွား အလုပ်ပြန် လမ်းတစ်ခုတည်း သုံးတာကြောင့်မို့လားတော့ မသိဘူး ဘယ်လိုသွားသွား ဘယ်နားမှာ ဘာရှိသဟဲ့ ဆိုတာလေးကိုတော့ သိ သိ နေတတ်တယ်။ အဲ့လို သိနေတတ်တော့ ကိုယ်က သတိမထားမိတောင် ယာဉ်ကြောရှုပ်တတ်ရင် အရှိန်လျှော့မိတာမျိုး တို့ ကွေ့ခါနီးမှာ အချက်ပြမိတာမျိုး တို့ သူ့အလိုလို လုပ်ဖြစ်နေရော။
လုပ်နေကျ ဆိုတော့ အကျင့်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာ။
အဲ.. ပြဿနာက အဲ့လိုဖြစ်နေတော့ တစ်ခါတစ်ခါ တခြားကိစ္စနဲ့ သွားရင်း အတွေးလွန်ပြီး အလုပ်သွားတဲ့လမ်းပဲ ဆက်သွားမိနေပြန်ပါရောဗျာ။
မန္တလေးမို့သာပေါ့ ရန်ကုန်လိုသာဆို ကွေ့မရ ပြုမရနဲ့ ပြီးပါလေရော။
အဲဒါက ဆိုင်ကယ်စီးရင်း လုပ်တတ်တဲ့ အကျင့်တွေပေါ့ဗျာ။
ကြားဖူးတဲ့ စကားပုံတစ်ခု ရှိသေးတယ် မျက်စိ အကျင့် ဝမ်း အချင့် တဲ့
နေ့စဉ်နေ့တိုင်း မနက်စောစော ထတတ်တဲ့သူက ဘယ်လောက် နောက်ကျပြီး အိပ်ပါစေ ထ နေကျ အချိန်ဆို မျက်စိက အလိုလိုပွင့်လာသတဲ့။
(ဦးမာဃတို့ကျ ဘယ်တော့ မှ စောစောထလို့မရတဲ့အကျင့် စွဲနေတယ်။ ခုနောက်ပိုင်း ခုနှစ်နာရီဆိုတာ အစောဆုံး ထချိန်ပဲ အဲ့လောက် ဝိရိယရှိတာ)
အကျင့် ဆိုတာကို ပြန်ဆက်မယ်ဗျာ ပြောချင်တာကို ဝေ့ ဝိုက်နေတာနဲ့တင် စာက ဘယ်ရောက်ရောက်သွားမှန်းမသိဘူး။
ဆိုတော့ကာ အပြုအမူ တစ်ခုခုကို ထပ်ခါတလဲလဲ လုပ်ဖြစ်တာ များလာရင် တဖြည်းဖြည်း အကျင့်ဖြစ်လာတတ်သဗျ။
အကျင့် တွေက အရိုးစွဲလာရင် ပြန်ပြင်ဖို့ဆိုတာ အတော်ခက်ပါရော။
ဒါကြောင့်မို့ ထင်ပါရဲ့ နယ်လှည့် ပါးရိုက်လာတာ ပြောတဲ့သူက ပြော ဘုရားရင်ပြင်ပေါ် ကားနဲ့တက်တဲ့သူကတက် နဲ့
အဲဒါတွေလည်း အရိုးစွဲနေတဲ့ အကျင့်တွေများ ဖြစ်နေမလား လို့
နောက်ထပ် တွေးနေမိတာက မုဒိမ်းမှုတွေဗျ
ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာကြီးပဲ ရ လာလို့လား ဒါမှမဟုတ် အရင်က ပိတ်ထားတာတွေပဲ ပွင့် သွားလို့လားမသိ
မှုခင်းဂျာနယ် ကောက် လှန်လိုက်တာနဲ့ မုဒိမ်းမှုက တစ်ဝက်လောက်နီးပါး တွေ့နေရတယ်
ဟိုတုန်းက တိုးတိုးတိတ်တိတ် ဖြစ်နေပြီး ခုမှ ပို ပွင့်လင်းလာလို့ ပို တွေ့လာရတာလားတော့ မသိဘူးပေါ့ဗျာ။
ဒါမင့် ဘာလို့ ဒီလောက်တောင် ဖြစ်လာလဲ လို့ တွေးကြည့်တော့ အဖြေလို့ ထင်ရတာလေးက ရေးရေးလေး ထွက်လာတယ်။
ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း လို့ ပြောရမလား ခေတ်မီလာကြတာလို့ ပြောရမလား အင်တာနက် ဆိုတာကြီးနဲ့ တွဲပါလာတဲ့ မကောင်းကျိုးတွေပေါ့ဗျာ။
ခုခေတ်မှာ လူတိုင်းနီးပါး လက်ထဲမှာ ဖုန်းတွေရှိလာတယ် တရုတ်ကြီး ကျေးဇူးနဲ့ အင်တာနက် ဆိုတာကို လွယ်လွယ်ကူကူ သိလာကြတယ်။ (သူ့ ဟန်းဆက်တွေကြောင့် အင်တာနက်ကို လွယ်လွယ်သုံးနေနိုင်တာကိုးဗျ)
ဆိုတော့ ရွှေမြန်မာများ အင်တာနက်မှာ ဘာတွေရှာသလဲတော့ သိပါဘူး ဗျာ
google မှာ မြန်မာစာလုံး တစ်လုံး ရိုက်ကြည့်လိုက်ရင် ကျ ကျ လာတဲ့ auto suggestion တွေက ဟိုအကြောင်းနဲ့ နွှယ်တာတွေ ကိုးဆယ်ရာနှုန်းလောက် ပါနေတယ်။
ပြီးတော့ ဟိုတစ်ရက်က play store ကို မွှေကြည့်တာ top downloads ထဲမှာ ပြာတာတာ application လေးက ထိပ်ကပြေးနေသဗျာ။
ပေါ်လာလိုက်တဲ့ website တွေ၊ facebook page တွေကလဲ one go two come လား မသိ မှိုလိုပေါက်နေရော။
ဟို အရင်ကတော့ ဒီကိစ္စတွေ သိချင်ရင်တောင်၊ စိတ်ဝင်စားရင်တောင် ဒီလောက် လွယ်လွယ် မရဘူးဗျ။ အခုတော့ ကြီးသူငယ်သူ မည်သူမဆိုရဲ့ လက်တစ်ကမ်းမှာ အဆင်သင့်ပါဗျာ။ ဒါတွေကပဲ မတော်တရော်တွေလုပ်ဖို့ ပို တွန်းအား ပေးနေသလားလို့ တွေးမိပါတယ်။
လူ့ စိတ်သဘာဝ အရ ပိတ်ထားရင် ပိုလုပ်တတ်တဲ့သဘောကြောင့်လားတော့ မသိဘူးပေါ့ဗျာ။ ခိုးစားရတဲ့အသီးက ပို ချိုတယ်ဆိုလား ကြားဖူးတာပဲလေ။
ဒီကိစ္စတွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း အသိပညာမပေးဘဲ ထားထားလို့များ ဒီလောက်ထိ ဖြစ်နေတာလားလို့လဲ တွေးမိပါတယ်။ ဖုံးလေလေ ဖိလေလေ ပို ကြွလေလေ ဆိုတဲ့ သဘောလို့ပဲ ပြောရမလားပေါ့
တွေး ကြောက်မိတာကတော့ လူငယ်တွေ အရာရာကို စူးစမ်းချင်နေတဲ့အရွယ်မှာ ဒါတွေကြောင့် လမ်းမှားရောက်သွားမှာ၊ အမှားတွေ လုပ်မိမှာကိုပါပဲ။
ကြားဖူးနေတဲ့ စကားတစ်ခွန်းရှိတယ်။ တရုတ်ခေါင်းဆောင် တိန့်ရှောင်ဖိန် ပြောခဲ့တာပါ။
တံခါးကိုဖွင့်ပါ။ လေညင်းရနံ့ကို ခံစားပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာ ဝင်လာမယ့် ပိုးကောင်မွှားကောင်တွေကို ဖယ်ထုတ်ပါ တဲ့။
ဒါပေမယ့် လေကောင်းလေသန့်ထက် ပိုးမွှားက ပိုအဝင်များနေလာလို့။
နိုင်ငံတကာမှာ ဒီကိစ္စကို ဘယ်လိုထိန်းတယ် ဆိုတာကိုသိချင်မိပေမယ့် အခုထိတော့ မရှာဖြစ်သေးဘူးရယ်။ သိရင်လည်း ပြောပြကြပါဦး။
အဲဒါကလည်း လတ်တလော တွေးနေမိတဲ့ အတွေးပါဗျာ။
ကြံဖန် ဂုဏ်ယူရမယ် ဆိုရင်တော့ ဦးမာဃတို့နိုင်ငံလည်း ခေတ်ရေစီးကို အမီတော့ လိုက်နေတယ်ပြောရမှာပေါ့။ ကောင်းတာကို ပယ်ပြီး မကောင်းတာကို ယူဖြစ်နေတာလေး တစ်ခုပဲ ဆိုးကွက် ရှိတာပါ။
နွေနေ့လည်ခင်းတွေမှာ တွေးမိနေတဲ့ အတွေးစလေး နှစ်စ ပေါ့ဗျာ။
သဂျား တွေးသလို ပါပဲ
လူ ငယ်တွေ ဘာကိုအတုယူရမယ်ဆိုတာ မသိကြ သေးတာပါ
အယ် အတုယူချင် စဖွယ် ရှေ့ပြေးဖြစ်တဲ့ လူဂျီးတွေ တောင် ဟိုဆိုင် ဒီဆိုင်
မှာရောက်နေတာတွေ ကြောင့်လည်း ငါ့မ နိုင် ငါ့သားေ တွ ဖြစ် ကုန်ကြတာပေါ့
ဖုန်းတွေ အင်တာနက်တွေရဲ့ အသုံးဝင်မှုကို တလွဲအသုံးချတတ်တဲ့ အသိမှောင်မိုက်မှုတွေလည်း ပါသပေါ့
လွပ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်၊ ပြောဆို၊ ပြသ ခွင့်
ဟဲဟဲ ဒီမိုကရေစီ လမ်းစဉ်အရ ဖော်ချွတ် (အဲလေ) ဖော်ဆောင်ကြတာပါ
အရိုးစွဲ အကျင့်အတိုင်း ဟိုဘက်က ရှေ့နေလိုက်ရရင် မကောင်းမှုမှာ ပိုပြီးသာယာတတ်သူကို လူ လို့ ခေါ်လေမလား ပေါ့
စာတစ်တန် ပေတစ်ဖွဲ့နဲ့ ပို့စ်တစ်ပုဒ် ထပ်လာရင်လဲ သဘောပါ
၅တန်းကျောင်းသားလေးရဲ့ဖုန်း လော့ချထားတာ passwordမေ့သွားလို့ ပြန်လုပ်ပေးရင်း ပွင့်လာတော့
ဘုရား ဘုရား ပြာတာတာကားတိုတွေ၅၀နီးပါးလောက်ရှိသဟဲ့
smart kids တွေပါလား (kids with smartphones….)
ယနေ့လူငယ် နောင်ဝယ်လူကြီး တိုင်းပြည်ကို အုပ်စီးမည့်သူများကို ကြည့်ကြပါလော့…….
ကဲဗျာ မျက်စိစုံမှိတ်ပြီး သဂျီးနောက်က လိုက်အော်မယ်
တိုးတက်လာတဲ့ ရုပ်ဝထ္ထူခေတ်ကြီးကိုပဲ အပြစ်ဆိုရမလိုလို…
ပိုက်ဆံသိပ်မရှိရင် အင်တာနက်မှာ ကြည့်လို့ရတယ် ၊ ရှိရင်တော့ လက်တကမ်းမှာ…
အဲဒါကြောင့် မဟာဖိုဝါဒထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ မုဒိမ်းမှုတွေ တန်းစီပြီးဖြစ်ကုန်ရော…
ဥပမာ အိန္ဒိယကိုကြည့်ပါ… အမျိုးသမီးများအတွက် မလုံခြုံတော့ဘူး…
ရုပ်ဝတ္တုတွေ တိုးတက်နှုန်းက ဂျက်လေယာဉ်သွားသလိုပဲ
နောက်ကနေ အပြေးအလွှား လိုက်နေကြတော့ ပြင်ဆင်ချိန်လည်းမရ
အဲဒါကြောင့်ပဲ ကောင်းကောင်း မပြင်ဆင်နိုင်တဲ့ ကျနော်တို့ဆီမှာ ဒီလိုတွေ များနေတာလား လို့
အတွေးနှစ်စ နဲ့ ကိုရင်မာဃ
ဒုတိယအတွေးစ ကလည်း အကြောင်းတစ်ချက်ပါသပေါ့လေ..
မပြောရက်ပါဘူးဗျာ ပက်လက်လှန် တံတွေးထွေးသလိုမို့…
အဟမ်း.. နာ ပြောမရတာကြီးကို နီက စလာတော့.. နာ့မှာ မန့်ချင်လျက်နဲ့ မန့်မရ..
အဲ့မုဒိန်းမှုတွေအကြောင်း နာကောက်ချက်ချထားတာ ရှိတယ်လေ..
ဟင့်စ်လေးပေးရရင်တော့ မဖြစ်နိုင်တာကို ဖြစ်နေသလို ရေးထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေကြောင့်… လို့ ထင်တာပဲ..
ဒါပေမယ့် သိတဲ့အတိုင်း မနေနိုင်
ပြီးတော့ အစလေးတွေ ထွက် ထွက်လာတာဆိုတော့ ပြောဖို့ကို အစ ပြန်ဖော်ပေးသလို ဖြစ်ဖြစ်နေတာ
တကယ်ပါ ဆင်ဆာ ပြန်လာခဲ့ပါ
“တံခါးကိုဖွင့်ပါ။ လေညင်းရနံ့ကို ခံစားပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာ ဝင်လာမယ့် ပိုးကောင်မွှားကောင်တွေကို ဖယ်ထုတ်ပါ တဲ့။”
ပြသနာက တံခါး က အထပ်ထပ်ဖြစ်နေတယ်။
တကဲ့ လေညင်းရနံ့ ရဖို့ တံခါး က နောက်ဆုံးဖြစ်နေမလားဘဲ။
အဲဒါမရောက်ခင် ပိုးကောင်းချည်း ဝင်လာနေရင် ခက်ကော။
ကလေးတွေအတွက် အင်တာနက်ကို အဲဒီတွေမှာ ဘယ်လိုထိန်းထားသလဲ တကယ် သိချင်မိတယ်ဗျာ…
ငါကတော့ဖြင့် နှစ်စ လို့ မထင် …
အနည်းဆုံး သုံးစ ပဲကွ ….
မှားရင် လည်ဖြတ်ခံမယ် …
အဲဒါဆို ကျန်တဲ့တစ်စ ပြောပြ လေ
အစကတည်းက မူးချင်ချင်ဖြစ်နေတာ အဲဒီကျန်တဲ့တစ်စ လိုက်ရှာရင် ချာချာပါလည်မယ်
ရပ်​​ကျော်​ ရွာ​ကျော်​ ဖြစ်​​နေအုံးမယ်​
မဖွ​စေချင်​ရင်​ ဆရာကြီး ဆယ်​ခါ​ခေါ်
နေစမ်းပါဦး ကျုပ်အတွေးကို သိရအောင် ကျုပ်ခေါင်းထဲများ ဝင်နေသလား
စိတ်ချ သုံးစ မဟုတ်ဘူး အစပေါင်းက မြောက်များစွာ
ဒါ ဆွဲထုတ်မိတဲ့ နည်းနည်းလေးပဲ ရှိသေးတယ် ငိငိ
ဆြာသမား…ခင်ညားလေး နွေလည်မှာ ဒါမျိုးပဲတွေးသလား …မသိလို့မေးတာပါ… ညှီထှာ… အဟိဟိ
အကြောင်းကြောင်းကြောင့် အကြောင်းကြောင်းကြောင့် မျက်စိရှေ့ကိုရောက်လာ နားထဲကို သတင်းတွေ ဝင်လာတော့လည်း…..
အတွေးဆိုတာ ခဏနားထားလို့ ပြောလို့မှမရတာနော့…
ဒါဆို ငယ်ငယ်က ဖတ်ဖူးတဲ့ ၀ိဇ္ဖာကာတွန်းထဲက ဇာတ်ကွက်လိုဖြစ်နေဘီ..။ တိုင်းပြည်မှာ မဒိန်းမှုတွေများတော့ ပညာ၇ှိတွေကဘုရင်ကိုလျောက်သတဲ့….။ တိရိစ္ဆာတွေကိုကြည့်ပါတဲ့ သူတို့ အ၀တ်မ၀တ်တော့ သူတို့ ဆက်ဆံချိန်က တစ်နှစ်မှာအများဆုံး တစ်လပဲတဲ့ ဥပမာခွေးတွေ၊ကြောင်တွေ လိုပေါ့..။ ဒီတော့ ဒီလိုအ မှုတွေမဖြစ်အောင် လူတွေလည်း အ၀တ်မ၀တ်ဘဲ နေထိုင်သင့်တယ်တဲ့…မှတ်သားလောက် ပါပေတယ်..နော်..။
ဒီပညာရှိကိုလည်း သမ္မတ အကြံပေးတို့ ဟိုဝန်ကြီးတို့နဲ့ အတူတူထားရမယ်ထင်တယ်
တခုခုကို လုပ်ပါများလာရင် အလေ့—အကျင့်—အထုံ—စရိုက်–၀ါသနာ လို့ပါသွားသတဲ့။
ဒါကြောင့် မကောင်းတာကို နည်းနည်းလေးမှ အလေ့အကျင့် မဖြစ်အောင် သတိနဲ့ ကြိုးစားပါတဲ့။
မုဒိန်းမှုများလာတာတော့ မီဒီယာတွေ ကြောင့်ပိုသိလာရတာလို့ ထင်တယ်။
ရှေးကတော့ ကိုယ့်အရပ်ထဲက သတင်းပဲကြားရတာကိုး။
ဒါတောင် ရှက်လို့ တော်ရုံလူက ဖွင့်မပြောကြဘူး။
မကောင်းတာကို မကောင်းမှန်းသိပြီး ရှောင်နိုင်အောင် ကြိုးစားနေပါတယ် (ကြိုးစားနေဆဲပါ ဟီးး)
မီဒီယာတွေ ပိုများလာတာလည်း ပါမှာပေါ့နော်….
မြန်မာနိုင်ငံမှာ တစ်နှစ်ကို အဲ့အမှု ဘယ်လောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကို သိချင်မိတယ်ဗျ။
တရားရုံးမှာတော့ မှတ်တမ်းတွေ ရှိမယ်ထင့်
သေ ချာ တာ တော့ ဆိုင် ကယ် ကို ငေး ပြီး စီး ရင် တစ်ေ န့ ၀ုန်း ခံ ရ မယ်။
ဒီ မီ ဒီ ယာ က နေ ပုံ တွေ မြင် တာ ကြောင့် ရယ် လို့  တော့ ပုံ သေ ပြောမ ရ
ဒီ ကိစ္စ ကို နား လည်သဘော ပေါက် အောင် စ နစ် တ ကျခံ စား တတ် အောင်
သင် ပေး သင့် ပါတယ်။
ဆိုင်ကယ်စီးတိုင်း အဝုန်းမခံရအောင် မနည်း ရှောင်နေရတာပါဗျာ
ပြီးတော့ စီးတိုင်းလဲ အတွေးတစ်စက ပါနေကျ ဗျ။
နားလည်သဘောပေါက်အောင် ဆိုတဲ့ကိစ္စကတော့ နည်းနည်း ခက်မယ်ထင်တာပဲ
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ တစ်ချိန်လုံး ရှက်ရ ကြောက်ရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုအနေနဲ့ပဲ ထားခဲ့ကြတာလေ
အတွေးက ဟိုတစ်ယောက် အကြောင်း မပါဘူးလားးးး
ဟီးး အဲဒါက ချွင်းချက်
စက္ကန့်မလပ် တွေးမိနေတယ်ဆို ပိုတယ်လို့ ဆိုလေမလားး
ငါ ပြောချင်တာ …
အဲ့လာ .. အဲ့လာ … ဟဲဟဲ …
ငါ့ကို ဆြာကြီး ဆယ်ခါ မခေါ်ရင် ဖွဘုတ်ပေါ်ရော … ဂွဇက်ထဲရော ဖွပလိုက်မှာနော် .. ငွင်းးငွင်းး